5 Best Meelo tagidda Winter In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Meelo tagidda Winter In Europe
Europe ayaa soo jiidashada a jiilaalka qaarkood bilaha qabow in qaar ka duwan meesha kasta oo dunida ah. Waxaa jira wax badan oo kala duwan, iyo laba ma aha meelaha leeyihiin dareen isku mid ah iyo jawi. Dhab ahaan, dad badan ayaa sheegaya in magaalooyin iyo tuulooyin bilaha qabow ee dareemayaa u safraya a caga cusub. Winter uu awood fantastik ah inay u beddesho Europe gebi ahaanba, iyo markeeda, abuuraan waayo aragnimo gebi ahaanba ku cusub visitors in aanay la kulmi karaan mar kasta oo kale ee sanadka. baraf dhicidda waxa ay u badan oo hawlaha xilliga qaboobaha iyo fasaxyada muhiim ah in samaynaysaa wax walba oo aad u dabaaldegga. In kasta oo faro badan ee isbedel iyo qurux, waa wax aan macquul aheyn in ay soo booqdaan wax walba oo. Haddii aad rabto in ay u safraan in qaar ka mid ah kuwa ugu dhibco safarka caanka ah, booqo kuwan 5 Meelaha jiilaalka ee Europe.
gaadiidka Tareenka waa habka ugu bay'adda u fiican in safarka. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save Tareen A jaban Tigidhada in Tareenku Website In Adduunka.
1. Meelo tagidda Winter In Europe: Budapest, Hungary
Haddii aad raadinayso jiilaalka a Ihmemaa in aad yaabiyo doonaa, ka dibna fiiri sii badan Budapest. Waa magaalada ugu fiican ee ku cararaan jiilaalka a. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee in badan oo dooran Budapest waa heerka la awoodi karo. Waxaad ka heli in ay la kulmaan magaalada loo jecel yahay, waayo, heerka la awoodi karo. Budapest inta badan waa ay ka buuxaan dalxiisayaal inta lagu jiro xagaaga. Si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waxaad ka heli si aad u aragto quruxda magaalada dad yar ee. taas laga soo tago, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
oo faa'iido dheeraad ah waa Margaret Island cajiib ah. Waa meel kaamil ah booqashada haddii aad rabto in aad leedahay dagaalka baraf Tacaddi. Dad badan oo deegaanka iyo dalxiisayaasha ururin saaxiibadood oo wuxuu ku raaxaysan barafka. Haddii baraf ma aha kuu, ka dibna wuxuu ku raaxaysan barafka hore ee qalcaddii a! Budapest City Park ayaa noqonaya dhib kobaha barafka xilliga jiilaalka. Marka aad dhammeysato ciyaaraha barafka, aad u guurto karaa si bad. The HBS Gellert la yaab leh waa meel fiican ilaa kululee oo wuxuu ku raaxaysan qaar ka mid ah biyaha kaamerada.
Venice laga yaabaa in aanay noqon waxa ugu horeeya ee ay u soo xusuusisa markay aad qiyaasi qaboobuhu Yurub. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u safarto magaalada kanaalada xilliga jiilaalka, weligaaba waxaad u xusuusan doontaa. The jidadka iyo makhaayadaha buuq isugu yihiin qabnay hoos, oo waxaad arki dhinac ka mid ah magaalada in xagaaga aan muujin karin. All yihiin dhaqdhaqaaqa iyo hawlaha bilaha xagaaga waxaa bedelay xawaal iyo jawi degan in u san yahay waayo Dooxa jiilaalka a. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in magaalada ay timaado in nolosha si dhakhso ah marka Venice Carnival duub agagaarka. kasta February, magaalada helo xowli ah ee visitors, iyo waji ornate daadad jidadka magaalada. dharka iyo qoobka Creative waddooyinka keeno magaalada taariikhda midabo in nolosha. Haddii aad rabto in xilliga qaboobaha ah noole in aad waligey illoobi doonin, gelin Venice on liiska.
3. Meelo tagidda Winter In Europe: Paris, France
France wadaajiyo inta badan dadka la cunnada delicious iyo qaybaha taataabtay. Si kastaba ha ahaatee, dalka noqonayaa mid ka soo jiidasho badan marka duub jiilaalka agagaarka, gaar ahaan magaalada. Paris waxaa arrinta ma waxa waqti ee sanadka aad halkaas u safraan cajiib ah. Nasiib darro, ma dad badan si ay u la kulmaan inta lagu guda jiro xilli qabow. Paris, magaalada jacaylka iyo hindiga, waa hubi inaad ku farxi iyo yaab haddii aad wax kama qaba xirnaa jaakada diiran iyo labbiska kale xilliga qaboobaha. Xilli xafladda keentaa Paris si ay nolosha. Visitors oo keliya ma heli karo in ay faraha la cuntada delicious iyo ciidaha khamri. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa markii ugu fiican in la arko dhacdooyin la mid ah The Festival Wonderful at Musee des Arts Fairground iyo Lights Festival ee des Quranka oo ku Plantes.
Baadh suuqyada magaalada iyo jidadka lagu qurxiyey, inta aad qaadato quruxda magaalada. Winter waa markii ugu fiican in ay qaataan socod weheliyaan bangiyada Seines ama lumaan jidadka Le Marais. Marka aad aragto in, aad arbushin karaa cafe a PSG oo wuxuu ku raaxaysan cabitaan wanaagsan. Marka waa soo gabagabeeyay, waxaad ka arki kartaa oo dhan soo jiidashada ugu weyn ee Paris la khadadka ka yar.
In kasta oo kumanaan kun oo dalxiisayaal ah iyo ido inay Austria sannadka oo dhan, waxaa jira gaar ah dareenka ekayd inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Dhammaan magaalooyinka iyo magaalooyinka dalka laha dareenka faraxgelinta ah in uu yahay arrin u gaar ah. Waxaa jira Baraf inta badan la taaban karo ka soo November ilaa Maarso. Tani waxay ka dhigan tahay in baraf ku caashaqay hubto in ay u sujuuda qaboobuhu Austria. Haddii aad rabto in aad la kulanto nuxurka qaboobaha ah Austria, booqashada Vienna. caasimada Tani grand caan ku tahay ruux oo iidaya iyo labbiska sifo. Haddii aad tahay in niyadda loogu qaar ka mid ah shopping qaboobaha, hubisaa in aad booqatid suuqyada Christmas. Vienna ayaa qaar ka mid ah suuqyada caan ugu ah oo dhan ee Europe. Visitors u helaysaa in aad ku raaxaysan cunnada Austria delicious Oo waxay cabbaan khamrigii mulled qaar ka mid ah. taas laga soo tago, waxaa jira alaabo kala duwan handmade iyo dhadhan fiican dhaqmo shukulaatada.
5. Meelo tagidda Winter In Europe: Interlaken, Switzerland
Haddii aad tahay qof ka mid ah tallaabo aan qiyaasi kartaa waqti magaalada ah ee fasaxa qaboobaha, ka dibna Interlaken ee Switzerland waa meel jiilaalka aad ee. Si ka duwan oo caan ah, Meelaha weyn magaalada, Interlaken waa magaalo dalxiis tago oo u dhow Alps. Kumanaan ka mid ah orda iyo snowboarders dhigi si ay Interlaken qaboobe kasta oo isticmaalaan muuqaalkii cajiib dalabyo degaanka. Interlaken ayaa ugu fiican ee labada Caalamka. marka hore, dhawaanshaha iyo helitaanka habboon in hawlaha buurta la yaab leh. Marka labaad, waxay bixisaa wax walba oo ka mid ah doonayaan marka ay timaado goobaha. Haddii aad ku raaxaysato xiiso leh iftiin, ama aad rabto in aad tijaabiso xadka aad on Waddooyinkiisa xad-dhaaf ah, Interlaken waxaa loogu talagalay adiga. Wax alla wixii fikrad ah ee xiiso leh waa, aad ku farxi doonaa in la ogaado in aad jidka magaalada ka dhigi kartaa dib oo wuxuu ku raaxaysan fondue qaar ka mid ah.
Europe ayaa qof walba wax u. Waxay waa si aad u go'aansato waxa jiilaalka Ihmemaa looks sida iyo isticmaalka Save A tareenka oo ay halkaas ka heli. Waxaa jira wax badan oo ay u waayo-aragnimo in bilaha jiilaalka, so get adventurous and take a bold step forward.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Meelo tagidda Winter In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dso – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel trainjourney talooyin tareenka travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations safarka qaboobaha